Business Archives - Dainik Headlines
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपालिका– ४ लामीडाँडाका चाकु व्यापारीलाई हिजोआज चाकु बनाउन भ्याइनभ्याइ भएको छ। माघेसङ्क्रान्ति नजिकिँदै गर्दा बजारमा यसको माग बढी हुने भएकाले यतिखेर चाकु व्यवसायी निकै ब्यस्त रहेको देखिन्छ । विगत १५ वर्षदेखि सो व्यवसाय गर्दै आएका पाँचखाल नगरपालिका–४ लामीडाँडाका विष्णुपुकार श्रेष्ठले दैनिक १०० किलोदेखि १५० किलोसम्म चाकु …
काठमाडौँ । आज सोबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आईतबार सुनको मूल्य ६० हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि उकालो लागेको छ। आज तेजावी सुन ६० …
माघे संक्रान्तिको दिन पवित्र नदीमा स्नान गरेर सुर्यलाई अर्घ्य दिने परम्परा रहिआएको छ। ज्योतिष शास्त्रअनुसार ९ ग्रह मध्ये सुर्यलाई राजा मानिन्छ। सुर्य ग्रह जब धनु राशीबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्छ। तब माघे संक्रान्ति मनाइन्छ। माघ १ गते देखि सुर्य दक्षिणबाट उत्तरतर्फ अस्ताउने गर्छ। माघे संक्रान्तिपछि खरमास समाप्त हुन्छ। पौष महिना …
पोखरा । पोखराको महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य गुप्तेश्वर महादेव गुफा व्यवस्थापन समितिले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा टिकट बिक्रीबाट रु चार करोड ५१ लाख ९९ हजार ४९१ आम्दानी गरेको छ । ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक महत्व बोकेको गुफाको कूल छ लाख ६६ हजार ९४१ आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकले टिकट काटेर अध्ययन अवलोकन …
विदेशबाट पैसा पठाउँदै हुनुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आजको विनिमयदर
काठमाडौं, २९ पौष । नेपाली बजारमा आज शनिबार विदेशी मुद्राको भाउ सामान्य रहेको छ। आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११२ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ भने विक्रिदर ११३ रुपैयाँ ०८ पैसा रहेको छ। यसअघि डलरको भाउ ११२ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको थियो। आज साउदी रियाल एकको खरिददर २९ रुपैयाँ ९९ …
वाशिङटन। अमेरिकामा गत महिना एक कन्जुस व्यक्तिको मृत्यु भयो । वाशिङटनमा बस्ने कन्जुस व्यक्ति एलेन नेमनको २०१८ डिसेम्बर ८ मा मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युपछि यस्तो वास्तविकता खुल्यो जसले सारा संसारलाई हल्लाइदिएको छ । यी व्यक्ति निकै कन्जुर थिए र पूरै जिन्दगी एक्लै बसे । न उनले विवाह गरे …
यस घरमा जन्मिएका नेपालको शान चर्चित गायक उदीतनारायण झालाई अहिले विश्वले सम्मान दिन्छ !
उदित नारायण झा एक प्रसिद्ध नेपाली पार्श्व गायक हुन्। उनले नेपाली, हिन्दी, मैथिली, नेपाल भाषा, उर्दू, तमिल, तेलगु , मलयालम , कन्नड, उडिया, आसामी र सिन्धी भाषाहरूको चलचित्रमा पार्श्व गायकको रूपमा गीत गाएका छन्। उनले हालसम्म करीब ३२ भाषाहरूमा २५,००० भन्दा बढी गीत गाएका छन् जसमा २६० चलचित्रहरू हिन्दी भाषाका …
January 11, 2019	Business 0
काठमाडौँ । आज शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य यथावत रहेको छ। आज छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। हिजो पनि सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी आज तेजाबी सुनको मूल्य पनि यथावत छ। आज तेजावी सुन ६० हजार ४ सय …
डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाका एक वडाध्यक्ष बुद्धमूर्ति चोरीको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उपल्लो डोल्पाको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष कार्मा गुरुङलाई प्रहरीले मूर्ति चोरीको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । शे– फोक्सुण्डो गाउँपालिका–४ मा रहेको राहाप गुम्बाका बुद्ध मूर्ति चोरीको आरोपमा वडाध्यक्ष गुरुङलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । वडाध्यक्ष …
आफ्नो २ हात र १ खुट्टा काटिनुअघि यस्ता थिए- कृष्ण वलि । हिरो बन्न चाहन्थे तर के गर्नु भाग्य…? (भिडियो सहित)
January 10, 2019	Business 0
आफ्नो २ हात र १ खुट्टा काटिनुअघि यस्ता थिए- कृष्ण वलि । हिरो बन्न चाहन्थे तर के गर्नु भाग्य…? (भिडियो सहित) रुकुम पश्चिमको सानोभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ९ का २१ वर्षीय कृष्ण ओली । मिजासिलो बोली, हँसिलो मुहार, खाइलाग्दो तन्नेरी जोवन, फूलजस्तै सुन्दर जीवन संगिनी । आमाले अर्कै रोजिन्, बाबाले …